Nnukwu fighter, panel ọrụ. Ezigbo obi ụtọ iji efe efe. Anyi n’ekele ndi n’edeputa ihe n’iru mara nma nke a add-on. Tdị T.7 bụ ọzụzụ oche abụọ (ewepụtara 650).
The Gloster meteor ahụ bụ nke mbụ agha ugboelu ejikwara site na United Kingdom, na naanị ụgbọ elu nke ụdị na-eji Allied agha n'oge Agha Ụwa nke Abụọ. Ọ e wuru ihe fọrọ nke nta 4000 mbipụta, ụfọdụ ikikere ma na-eji n'ọtụtụ mba tumadi n'oge 1950s.
Onye edemede: Dave Eckert Ralph Pegram Nick Needham Rob Barendre